Izingxabano ezinhle kakhulu zokuhweba - Zokuhweba ezinhle
Spanacom icala nganoma yimaphi nanoma ikuphi ukulahleka noma ukulimala zokuhweba. Njengebhizinisi elifuna ukuchayeka, umnikeli we- Street View onesipiliyoni angasiza uthole ukubonakala ngokushesha futhi kalula.
Y Zidinga ukuphiwa ukudla kwezinkukhu zenyama okusezingeni amasonto ayisithupha ( 6) wonke ( noma okungakanani ezingakudla). Ngolunye usuku, kungazelelwe uGabrielle watshela uNicole ngolaka ukuthi akanandaba nokuhamba kwakhe.
” ( 2 Korinte 6: 12, 13) Izihlobo ozivakashela kanye kuphela ngonyaka zigcina zingasaziwa— ikakhulukazi ezinganeni. Ngakho wanquma ukungakunaki abakushoyo.
“ Niminyene othandweni lwenu. Ejabule ngokuthi umkhaya wakubo uthuthela kwenye indawo ekude, uNicole oneminyaka engu- 8 wayehlale exoxela umngane wakhe omkhulu uGabrielle ngakho konke okwenziwayo. Y Zikhula ngokushesha kakhulu kanti sezingahlatshwa uma sezinama sonto ayisithupha ( 6). Ukuhweba ngokomzwelo akudingeki kube yinto embi - ikakhulu uma ulawula.
Nansi okuhle, okubi, nokuhweba kokuhweba ngokomzwelo. Okuhle kakhulu ngaphansi kweLes Halles, esinye sezikhungo ezinkulu zokuhweba eStrasbourg, ngokuvamile kuvulwe ngoLwesine - ngeSonto. Izingxabano ezinhle kakhulu zokuhweba. Ngenxa photographer noma i- ejensi, - Street View izithombe inikeza enamandla yokuthengisa isiphakamiso.
Njengoba ibhodlela le- champagne lingama- 170 €, kufanelekile ukujoyina elinye lamaphephandaba abo amaningi. Ukuxhumana nazo njalo kunciphisa izingxabano.
Fundisa Ingane Yakho Ukuba Ibe Nokuthula. Manje, ngisho noma abanye beyigxeka inkonzo yakhe, ujabule ngoba uyazi ukuthi wenza konke.
Y Izinkukhu zenyama zisinda kakhulu uma zigcinwa kuze kweqe emasontweni ayisithupha ( 6) zibe seziqala. Lawo mavesi amkhumbuza ukuthi ukujabulisa uJehova yikona okubaluleke kakhulu.
Ezinye izingane zinomuzwa wokuthi kuncane kakhulu okuzihlanganisa nogogo noma nomkhulu noma nezihlobo ezikude. Isiqondiso ihlose ukuxazulula izingxabano yomthetho futhi umthetho cross- border ngongakwazi ukukhokha izikweletu kwecala uphinde uqinisekise ukuthi ukuqashelwa yezahlulelo eziphathelene ngongakwazi ukukhokha izikweletu kulo EU.